INONA NY FIHENAN'NY FAMAKIANA HDD? - HARD DRIVE - 2019
Tena Hard drive
Ny momba ny haavon'ny famakiana sarimihetsika mafy
Androany, ny fampiasana programa ordinatera manokana dia fitsipika fanoratana. Efa saika tsy misy olona manisy sary amin'ny taratasy misy pensilihazo sy mpitondra. Raha tsy voatery hiditra amin'ny mpianatra voalohany amin'ny taona voalohany izy ireo.
KOMPAS-3D dia rafitra fanoratana izay mampihena ny fotoana laniny amin'ny famoronana sary tsara tarehy. Ny fampiharana dia noforonin'ireo mpamorona Rosiana ary afaka mifaninana amin'ny fifaninanana tahaka ny Avtokad na Nanocad. Ny KOMPAS-3D dia mahasoa ny mpianatra iray manana ny rafitra sy ny injeniera matihanina izay mamorona sombin-javatra na modely amin'ny trano.
Ny programa dia afaka manatontosa sary misy sary telo sy dimanjato. Ny serasera mahavariana sy ny fitaovana maro samihafa dia ahafahanao manatona ny fizotran'ny sary.
Lesona: Ataovy ao KOMPAS-3D
Manoro hevitra izahay mba hahita vahaolana hafa amin'ny fanoratana ao amin'ny ordinatera
Ny KOMPAS-3D dia ahafahanao manamboatra sary manjavozavo: avy amin'ny fitaovana kely kely ho an'ny fitaovana fanorenana. Azo atao ihany koa ny mamolavola rafitra fananganana ao amin'ny 3D.
Ny fitaovana marobe maromaro hanamboarana zavatra dia manampy amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny fandaharanasa dia manana ny endriny ilaina mba hamoronana sary hosodoko feno: teboka, segondra, boribory, sns.
Ny endri-tsoratra rehetra dia azo atao amin'ny mari-pahaizana ambony. Azonao atao, ohatra, ny manamboatra tsipika kely amin'ny fanovana ny mpitari-dalana ho an'ity segondra ity, fa tsy ny firesahana ny zana-tsipika sy ny tsipika mifanitsy aminy.
Tsy sarotra ihany koa ny mamorona antso maro samihafa sy fanazavana. Ankoatr'izay dia azonao ampidirina amin'ny takelaka ny zavatra aseho amin'ny endriky ny sary efa voavonjy. Io endri-javatra io dia ahafahanao miasa tahaka ny vondrona iray raha ny tsirairay amin'ireo mpandray anjara dia mametraka tsipiriany maromaro momba ny zavatra rehetra, ary avy eo ny tsipika farany dia mivondrona avy amin'ny "biriky" toy izany.
Ao an-dalam-pandrosoana dia misy fitaovana ahafahana mamorona tsipiriany momba ilay sary. Amin'io dia azonao atao ny mametraka ny mari-pamantarana maromaro izay mahafeno ny fepetra takian'ny GOST.
Famaritana ho an'ny karazana sary
Ny fampiharana dia natao amin'ny famolavolana maromaro: fototra, fanorenana, engineering, sns. Ireo fanamafisana ireo dia mamela anao hifidy ny endriny sy ny fitaovan'ny programa izay mety indrindra ho an'ny asa manokana.
Ohatra, ny rafitra fananganana trano dia mety amin'ny famoronana fananganana antontan-taratasy mandritra ny fananganana tranobe iray. Na dia efa vita tanteraka aza ny endriky ny injeniera ho an'ny modely maimaim-poana amin'ny teknolojia rehetra.
Ny fifindrana eo anelanelan'ny fanovana dia mitranga tsy misy fanakatonana ny programa.
Miaraha miasa amin'ny modely 3D
Ny fampiharana dia afaka mamorona sy manova ny modelim-pandanjalanjana telo dimampolo. Izany dia ahafahanao manampy bebe kokoa ny rakitra nalefanao.
Amboary ny rakitra mankany amin'ny format AutoCAD
Ny KOMPAS-3D dia afaka miara-miasa amin'ny format DWG sy DXF ampiasaina amin'ny programa malaza AutoCAD malaza. Izany dia ahafahanao manokatra sary hosodoko noforonina ao amin'ny AutoCAD ary manangona rakitra amin'ny endrika izay fantatry ny AutoCAD.
Tena tsara raha miasa amin'ny ekipa ianao, ary mampiasa ny AutoCAD ny mpiara-miasa aminao.
1. interface tsara;
2. fitaovana marobe ho an'ny fanaovana sary;
3. Fahaterahana asa fanampiny;
4. Ny rindrankajy dia vita amin'ny teny Rosiana.
1. Ampitahaina ny sanda. Aorian'ny alàlan'ny famandrihana dia hahazo maodelim-pitsarana ianao, 30 andro maharitra.
KOMPAS-3D dia loharano mendrika ho an'ny AutoCAD. Ireo mpikaroka dia manohana ny fampiharana ary manavao azy tsy tapaka, mba hahafahany manohy ny fotoana, amin'ny fampiasana ny vahaolana farany amin'ny sehatry ny fanaovana sary.
Afaho ny version trial of KOMPAS-3D
FreeCAD QCAD ABViewer Ahoana ny fomba hanokafana sary amin'ny AutoCAD amin'ny Compass-3D
KOMPAS-3D dia rafitra maodelim-pahefana maoderina miaraka amin'ny fitaovana marobe ho an'ny famoronana sary sy ampahany.
Cost: $ 774
https://termotools.com mg.termotools.com © Hard drive 2019